Qualification - Hangzhou Fujie dibada Products Inc.,
Waxaan u jawaabi doonaa in 24 saacadood!
Fujie keeneyso in iibsaduhu asalka ah in Fujie products waa lacag la'aan ka cilladaha ee qalabka ama sancada in muddo ah hal sano laga bilaabo taariikhda wax iibsiga. Fujie mas'uul ka ah ma aha abDuugga iyo jeexa caadiga ah, waayo waxyaabaha loo isticmaalo ganacsi ama fashilaad sababa shilal,abuse, Ebana,beddelid, si xun u isticmaalka iyo daryeelka aan habboonayn.
Ma jiraan wax damaanad kale express ka baxsan shuruudaha this damaanad kooban. Haddii ay dhacdo lahayn waa any maldahan fasaxyada, oo ay ku jiraan merchantability iyo taam ujeeddo gaar ah, kordhin ka baxsan muddada damaanad ah express, taasina ku jira. Haddii ay dhacdo lahayn waa Fujie ahaan masuul ka dhaca ah ama da aayamages.
Qaar ka mid ah dalalka hana u oggolaan in xadeyn ku saabsan sida ay u dheer damaanad ah maldahan socdaa ama ka saarida ee xadka- Dhaqso of waxyeelo shil ah ama natiijo, sidaas oo kale ayaa la dhaafi karin ku xusan ama ka saarid waxaa laga yaabaa in aan codsan si ay u aad.warranty Tani waxay ku siinaysaa inaad xuquuqda gaar ah waxaana laga yaabaa in aad leedahay xuquuq kale oo ka duwan yihiin dalka si ay u dalka.